Ogaden News Agency (ONA) – Go,aamo dhaxalgal ah oo Kasoo baxay shir-sanadeedka OYSU North America ee Denver Colorado
Go,aamo dhaxalgal ah oo Kasoo baxay shir-sanadeedka OYSU North America ee Denver Colorado
Waxaa sidaad lagu soo gabagabeeyey magaalada Denver ee gobolka Colorado shir-qaaradeedkii sanad leha ahaa ee Waqooyiga Maraykanka (North America) ee ururka dhalinyada Iyo ardayda Somalida Ogaadeeniya. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaanba urur-hoosaadyada, xubnaha iyo taageerayaasha qadiyada Ogaadeeniya ee qaarada waqooyiga Maraykanka ayaa waxaa lagu gorfeeyey mudadii sedexda maalmood ahayd ee uu socday qodobo muhiid u ah halganka uu ku jiro shacbiga Ogaadeeniya ee uu kuraadiyana xaqa aayo katashigiisa iyo sidii uu uga hoos bixi lahaa gumeysiga Itoobiya.
Hadaba shirka oo ujeedadiisu ahayd qabashada laba munaasabadood oo isku soo aadey oo kala ah; Xuskii sanad guuradii 1aad ee kasoo wareegtay tan iyo intii lamideeyey guud ahaan ururadii dhalinyarada Ogaadeeniya ee kajiray caalamka kuna midoobay urur weyna OYSU iyo shir sanadeedkii qaarada waqooyiga American (North America).
Shirkan oo socday mudo sedex maalmood ah ayaa galinkii hore ee maalintii jimcaha ahayd kubilowday soo dhoweyntii wufuudii kalala timid gobolada Maraynkana iyo Canada iyo waliba xunbo kasoo kicitimay qaarada yurub. Habeenimadii jamcaha ahayd ayaa waxaa furmay shirar goos goos ah oo isugu jira isbarasho iyo isu xogwaran ay is waydaarsanayeen waftiyadii shirka kasoo qaybgaley.
Maalinti sabtida ahayd ayaa waxaa furmay shirweynihii oo si heersare ah loosoo abaabuley oo ay ka soo qaybgaleen dadweyna aad u tiro badan oo muujinayey shucuur iyo sawaxan soo jiidasho leh oo laga maqlayo nawaaxiga hallka shirka. Shirka ayaa qaybtii sii hore waxaa lagu furey warbixin heersare ah oo ay si talantaali ah u soojeediyeen waftigii qaaliga ahaa ee uu hogaaaminayey hogaanka arimaha dibada ee JWXO mudane Abdirahman Sh Mahdi Madeey oo ay weheliyeen hogaanka qorsheynt iyo cilmi baadhist JWXO mudane Mahamud Nur, wakiilka JWXO u qaabilsan Maraykanka mudane Ahmed Majerteen iyo Isku-duwaha gobolada looyaqaano West Coast mudane Ahmed Ali Yusuf.
Kadib khudbadihii kaladuwanaa ee ay halkaas kasoo jeediyeen madaxdii jabhada ee kasoo qaybgashay shir waxaan laguda galay qaybtii labaad ee shirka oo ay guud ahanba daadihinayeen madaxda ururka dhalinyarada ee heer qaaradeed. Qaybtaas dambe ee shirka oo aad u xiiso badney ayey dhalinyaradu kusoo bandhigeen barmaamijyo xiise leh oo isugu jiray warbixino maqal iyo muuqaal ah aad iyo aad u qiiro galayey dadweynihii goobta joogay iyo qaybihii madadaalada (entertainment) sida heeso iyo dhaanto guuxa oo dhamaantaad kawada hadlayey amaba matalayey qadiyada Ogaadeeniya run ahaantiina kor u qaaday dareenka wadaniyadeed ee dadweynihii kasoo qaybgaley shirka.
Maalintii sedexaad oo ahayd Sunday July 24 ayaa waxaa dhacay shirka qaybtiisii ugu qiimahabadney wuxuna shirku ku furmay simanaaro iyo workshops ku saabsan ururnimada, hogaaminta bulshada iyo siyaasada oo ay soo jeediyeen qaar kamid ah maamulka dhalinyarada OYSU ee North American. Kadib aqoon isweydaarsi dheer wuxuu shirku dib ugu noqday qaabka doodwadaaga ah ee afka qalaad lagu yidhaahdo round-table iyada oo laqiimaynayey waxqabadkii urur hoosaadyada dhalinyarada mudadii sanka ahayd ee ay jireen. Waxa qabsoomay, maxaan qabsoomin, maxaase ubaahan in hada wax laga qabto. Kadib falanqeyn dheer shirku wuxuu isla qaatay amaba isku raacay qodobadan hoosku xusan
1. xoojinta iyo adkeynta midnimada dhalinyarada OYSU ee qaarada North American.
2.Gaadhsiinta laamaha ururka OYSU gobol kasta oo kamid ah qarada waqooyiga America
3.Taageerida, xoojinta iyo garab istaaga halganka xaqa ah ee umada Soomaalida Ogaadenya ugu jirto helida xornimo buuxda
4.Dhaqan galinta iyo qaadashada campaignka I CARE ABOUT OGADEN
5.Kor uqaadida aqoonta dhalinyarada meelkasta ay joogaanba iyada oo labarayo taariikhda wadankooda iyo tan wadamada kale ee kudayashada mudan.
6. Diiwaan galinta tacadiyada ka dhaca gudaha Ogaadeenya loona gudbiyo ha,yadaha xaquuqul insaanka ee ay quseeyso
7. Diiwaan galinta iyo uruurinta dhalinyarada u dhalatay Ogaadeenya ee kunool wadamada qurbaha
8. la,dagaalanka borobogaandada cadowga ee ku wajahan shaki galinta halganka xaqa ah ee Soomaalida Ogaadeenya ku jirto iyo shirqoolada wajiga badan
9.Hirgalinta simminaaro kor loogu qaadaayo aqoonta xubnaha ururka dhalinyarada
Wuxu shirku ugu baaqayaa hayadaha iyo wadamada deeqda bixiya in ay usoo gurmada shacabka Ogaadeeniya ee abaaraha jira kasakow ay cuntadii ka xidhay dawlada gumeysida iyo cabudhiska kudhisan ee Itoobiya. In baadhitaan buuxa lagu sameeyo arimaha laxidhiidha kuxadgudubka xuquuqda aadamiga ee ay Itoobiya waddo gobolka Ogaadeeniya oo beryahan dambe aad iyo aad uga soo daraya. Wuxuu sidoo kale shirku ugu baaqayaa shacabka Ogaadeeniya iyo walaalahooda Jamuuriyada Soomaaliyeedba in ay garab istaagaan halganka mudada dheer kasocda gobolka Ogaadeeniya halgankaas oo uu jaawib ka saaranyahay cidkasta oo nabada iyo cadaalada jecel.
Wuxuu shirku si buuxda u taageeray dhaqdhaqaaqa xoriyad raadiska ah ee uu ku jiro shacabka Soomalida Ogaadeeniya kagana soo horjeedo gumeysida manaxaanka ah ee Itoobiya. Waxaan dhiiri galinaynaa taageero hiil iyo hooba ahna aan lagarabtaaganahay geesinimada iyo adkeysiga ay muujiyeen CWXO iyo Shacabka Ogaadeeniya oo iskaashanaya.
Waxaan canbareeyneynaa falalka foosha xun ee ka dhanka ah sharciyada uyaala caalamka ee ay dowlada gumeysiga Itoobiya kula kacayso shacabka dulman ee Soomaalida Ogaadeeniya. Waxaan sidookale cambaareyn dusha uga tuureynaa inta gacan ku siinaysa dulmigaas ay dowlada Itoobiya ugaysanayso shacabka Ogaadeeniya iyaga oo fulinaya rabitaanka gumeysiga. Ugu dambaystiina waxaan u digaynaa gumeysi kalkaal naftooda u halaagaya sidii ay u raali galin lahaayeen gumeysiga. Waxaana leenahay kawaantooba u adeegida gumeysiga Itoobiya.
OYSU North American